प्रधानमन्त्रीकै रफ्तारमा अगाडी बढ्ला देश ? - Vishwa News
प्रधानमन्त्रीकै रफ्तारमा अगाडी बढ्ला देश ?
काठमाडौं । मन्त्रीपरिषद् पुनर्गठन निकै पेचिलो विषय थियो, जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार लगाएका छन् । यद्दपी उनी विवाद मुक्त हुन सकेनन् । यसको स्पष्टिकरण नै उनले दिनुपर्यो ।
बिहीबार नवनियुक्त मन्त्रीसहित मन्त्री र सचिवहरुको पूर्ण बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्रीले अरुलाई पनि पालो दिनु पर्ने भएकाले राम्रो काम गरेका मन्त्रीसमेत हट्नु परेको बताए ।
यसपटक मन्त्रीका रुपमा हटाइएका धेरैले कुनै न कुनै रुपमा कानूनि जग बसाल्न र स्थायित्व कायम राख्न योगदान गरेका थिए । उनले यसलाई कामको आधारमा भन्दा पनि पार्टीमा नयाँलाई अवसर दिन गरिएको भागबन्डाका रुपमा व्याख्या गरेका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्रीले जे बोले पनि उनको असन्तुष्टी आफ्नो रप्तार अनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने नै थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यो अभिव्यक्ति बेला बेला सार्वजनिक पनि गर्छन् ।
अब मन्त्रीपरिषद्मा उनले चाहेका मन्त्रीको नयाँ सेट तयार भएको छ । यसले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउँछ या मन्त्रीकै कारण काम गर्न सकिन भन्ने गराउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकि छ ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीको मूख्य चासो राजधानीको सडकका खाल्डामा थियो । यो बाँसुरी धेरै बजिसक्यो भन्दै उनले यथासिघ्र काठमाडौंका बाटोको खाल्डो पुर्न निर्देशन दिए ।
४ महिना भित्र काठमाडौंका बाटो पुरिनु पर्ने र आगामी चौमासिकमा यसको सकारात्मक नतिजा आउनु पर्ने उनको निर्देशन छ । काम गर्ने ठाउँमा धुलो नउड्ने गरी व्यवस्थापन गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।
उनले चिनियाँ राष्ट्रपति आएका बेला एक सातामा सडक चिल्लो पार्न सक्ने सरकारी निकायले अन्य दिन किन सक्दैन भन्ने आलोचना तर्फ इगिंत गर्दै सोही रफ्तार र तत्तपरता सधैभरी देखाउन समेत निर्देशन दिए । उनले भ्रष्ट्राचारमा कही कतै नमुछिन मन्त्रीशरुलाई सचेत गराए ।
दोलखा भीनसेन सर्वसाधारणको दर्शनका लागि खुला